နောက်ဆုံးတော့ "ဖွတ် ဖွတ်ချင်း အမြီးလိမ်" ~ Myanmar Express
ဘာလဲဟဲ့ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး
ဘယ်သူ့ကို ၂၀၁၅ မှာ နိုင်ငံတော် သမ္မတဖြစ်စေချင်သလဲ?
နောက်လိုက် တယောက်မှ မရှိတဲ့ ၈၈ မျိုးဆက် ရဲ့ နောက်ထပ် ခေါင်းဆောင် ဆိုတဲ့ ဦးကျော်ကျော်ထွေး ခေါ် မာလကီး က လူ့အခွင့်သမား မစုစုနွေး ကို ကောက်စား လိုက်တယ် တို့ သတင်းရရှိပါတယ်။ ရှေ့လထဲမှာ ဒီမိုကရေစီအတွက် လက်ထပ်ကြတော့မှာ ဖြစ်ပြီး ဇတ်လမ်းအစက လေဆိပ်မှာ သွားကြိုတုန်းက လို့ ဆိုပါတယ်။ နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ လွှတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် နဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီလ က ဦးကျော်ကျော်ထွေး လွတ်မြောက်လာချိန်မှာ လေဆိပ်တွင် မစုစုနွေးက သွားကြိုခဲ့ပြီး ၃ လ အကြာမှာ လက်ထပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ရှေးမြန်မာ ဂုဏ်သိက္ခာရှိ မိန်းခလေးတွေတုန်းကတော့ သုံးနှစ် သုံးမိုးလေ့လာပြီးမှ လက်ထပ်လေ့ရှိကြပေမယ့် လူ့အခွင့်အရေးသမား မစုစုနွေးကတော့ သုံးလနဲ့ လင်ယူဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာ ဝေဖန်သံတွေ အမျိုးမျိုးထွက်လာပါတယ်။ အကောင်းမြင်ကြသူများကတော့ မစုစုနွေးက လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ အမျိုးသမီး အခွင့်အရေးအတွက် ၃ လ ထဲနဲ့ လင်နောက်လိုက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်တာ ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်ကြပါတယ်။ လက်တလော နိုင်ငံရေးအခြေအနေ အရ လမ်းပေါ်ထွက် ဆန္ဒပြရမယ့်အခြေအနေ မဟုတ်တာကြောင့် ဘာမှ လုပ်စရာမရှိကြတာနဲ့ ကာမ ဖက်ကို ဦးစားပေးရမယ့် အချိန်ဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တိုက်တွန်းထားကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။မစုစုနွေးရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် သူငယ်ချင်းတစ်ဦးကတော့ သုံးလ နဲ့ လင်ယူဖို့ ဆုံးဖြတ်တာက မစောလွန်းကြောင်းနဲ့ ၎င်း တို့အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို အနောက်နိုင်ငံများကဲ့သို့ ခေတ်မှီစေချင်ကြောင်း ပြောပြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တုန်းကလည်း မိုက်ကယ်အဲရစ်ကို ၁၄ ရက် နဲ့ ပြန်ကြိုက်ခဲ့ကြောင်းလည်း အကြောင်းပြချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီအတွက်၊ လူ့အခွင့်အရေးအတွက်ဆိုပြီး ခေါင်းစဉ်တပ်ကာ တံခါးပိတ်ဆွေးနွေး သလိုလိုနဲ့ အတွင်းထဲမှာ အချင်းချင်း အမြီးလိမ်နေကြတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ကြောင်းကို မြန်မာအရေးလေ့လာသူများက သုံးသပ်ကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ လ တုန်းကလည်း ၈၈ မျိုးဆက်ခေါင်းဆောင် ဆိုတဲ့ ဦးဌေးကြွယ်ကတော့ NLD လွှတ်တော်အမတ် ဒေါ်စန္ဒာမင်းနဲ့ အတူအိပ်ခဲ့တယ်လို့ သတင်းများ ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။Myanmar Express
Posted in: သတင်း,အတိုက်အခံ များရဲ့ အရှုတ်တော်ပုံများကို ဆက်လက်ဖွင့်ချမည်
1 May 2012 19:39
doke kha bel !!!!
4 May 2012 08:48
ဒီ ၈၈ က ကျောင်းသားတွေထဲမှာ သူတို့ပဲ နာမည်ရနေသလိုပဲ အမြဲတမ်းပြောနေတော့ ငယ်နေသလားထင်နေကြတယ်နဲ့တူတယ်.. ဟိုနေရာလဲ ၈၈ ဒီနေရာလဲ ၈၈ နဲ့ အသက်တွေကြည့်တော့ သေတော့မယ်ဒါကြောင့်လည်း မျိုးပွားရအောင် မာလကီးနဲ့ စုစုနွေးတို့ ကနာမည်ပြောင်းချင်နေပြီနဲ့တူပါတယ် သူတို့ကမွေးလာရင် နာမည်ဘယ်လိုပေးစေချင်လဲ...နောင်မွေးလာမယ့် ၈၈ မျိုးဆက်သစ်ကို နာမည်ပေးချင်ပါသဖြင့် comments ဗေဒင်ဆရာများအား ဖိတ်ခေါ်အကူညီတောင်းခံအပ်ပါသည်......:)
12 May 2012 01:04
nga so yin3minutes so lin yu lot ya pyi3months taung wait sa yar ma lo puuu
7 June 2012 15:22
သြော် လောကကြီး... ရှေ့ဆောင်နွားလား ဖြောင့်ဖြောင့်သွားက နောက်နွားတသိုက်ဖြောင့်ဖြောင့် လိုက်ဧ။်။ ထို့အတူ သူတို့အမေ စုကြည် နောက်ကို လိုက်တာဆန်းလား။
7 June 2012 23:56
beautiful writing style
10 June 2012 16:58
သူသွေးဆုံးခါနီးလို့ အမြန်ယူတာလား၊ မာလကီးဆိုတော့ ကလစ်ဓါးကြိုက်တာလား၊ ခေါင်းဆောင် အမေစုက လိုးစေလို့ မြန်မြန် အမိန့်ပေး တာလားဆိုတာ ကာယကံရှင် မှသိမှာပဲ။
11 June 2012 14:00
ထားလိုက်ပါဆရာကြီးရယ် အိပ်ချင်တော့ ပြေသွားသားဟားဟာ
13 June 2012 01:08
မင်းတို့တွေလည်း ကိုယ်ထမင်းကိုစား သူများအတင်းပြောနေကြတာပါလား ...ရှက်တတ်ကြစမ်းပါ... ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ ဘုရားရဲ့ သြဝါဒတွေကိုမခံနိုင်မကျင့်သုံးနိုင်သမျှ ဘယ်တော့မှ လူကောင်းသူကောင်းဖြစ်လာမှ မဟုတ်ဘူး
14 June 2012 00:03
၈၈ တွေကဘာတွေလဲ သူတောင်းစားတွေလား လျှောက်အလှူခံနေတယ်ကြားတာပဲ
14 June 2012 04:24
There is no Rohingya in Myanmar and Bangladesh history. Bangladesh government and muslims named Muslims in Rakhine state to become Myanmar Ethnic . Bangladesh Government want Myanmar to become Muslim country if they don’t accept illegal 700,000 Bangladesh Rohingya muslims and illegal 700000 Rohingys live in Rakhine state and Myanmar. These rohingya s in Myanmar are real Bangladesh muslims. Bangladesh muslims invaded and insult Myanmar. They are liars .Myanmar President U Thein Sein and NLD party leader Aung San Su Kyi must do step by step . ( 1) Must do Press conference and clearly tell all Myanmar people and UK, USA and World governments and world media that Rohingya is not Myanmar ethnic and Myanmar Nationality forever . There is no Rohingya in Myanmar and Bangladesh history. Bangladesh government and muslims named Muslims in Rakhine state to become Myanmar Ethnic. They are liars . There isastatement that Rohingya is not Myanmar ethnic in Myanmar Constitution. There must be have Muslim (Islam) control laws ( ban muslims immigrants, ban Mosque and muslim schools and Islamic centers , 1 muslim for 1 wives and 1 muslim kid ) in Myanmar Constitution . If so, Rohingya and World can't colonize Rakhine state and Myanmar.(2) Current Myanmar President U Thein Sein and NLD leader Aung San Su Kyi issue leagal statement that Rohingya is not Myanmar Ethnic and Myanmar Nationality. (3) Then deport all 700,000 Rohingya Muslims who don’t have National ID or have ID ( because Rrohingya bribealot of money to immigration officers in Myanmar Bangladesh border ) and Muslims from Rakhine state and Myanmar. Arrest and fine Myanmar immigration officers and hospitals who took bribe from Bangladesh muslims and issue Myanmar birth certificates and National ID to illegal Bangladesh muslims. (4 ) Then Establish good economy in Northern Rakhine state ( Bangladesh -Myanmar border ) and organize millions of Myanmar migrate to Northern Rakhine and Rakhine state. If so Myanmar and Rakhine people will be majority in Northern Rakhine and Rakhine state.World Rohingya , Saudi Arabia Government and Other Muslim country governments and World muslims bribe , lobby and give millions of money to BBC, British Government ( One of Current UK cabinet is Muslim ) and VOA and World media , UN, NGO who support Rohingya. So Myanmar government and opposition leaders protest them. Arrest Pro Rohingya muslim , Myanmar muslims in UN, UNHCR, NGO in Myanmar.All Rakhine and Myanmar people must protest in front of Bangladesh Embassy, Saudi Arabia Embassy, British Embassy , British Consulate , and other pro Rhohingya and pro muslim country Embassies and Consulates in Myanmar about Rohingya..
15 June 2012 14:40
သူတို့ကိုယူမယ့်သူမှမရှိတာ သူတို့ကိုယူရင် ဘာသွားစားရမှာလဲ ဒါကြောင့်အချင်းချင်းပြန်ယူတာပေါ့ တစ်ခုခုများစားရမလားပေါ့စားတော့စားပီးလောက်ပါပီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကျောင်းသားတွေ ဘာတဲ့ ၈၈ ဟုတ်လား
19 June 2012 15:25
မာလကီး ဆိုတာ ကုလား မဟုတ်ဘူးလားနာမည်လည်း ကုလား နာမည် လူလည်း ကုလား ဘဲ ရုပ်က သေချာတယ် ရိုဟင်ဂျာ ကိုထောက်ခံနေတာ ခွေးများ အဖွဲ့ တော်ကြာ အူကြတော့မယ် စောင့်နေ အူတတ်ကြတယ် ၊၊
3 July 2012 17:07
ဒီမိုကရေစီအတွက် လက်ထပ်ကြတော့မယ်တဲ့၊ ကြုံဖူးပေါင် ဆင်ကြီး ဂဠုန်ချီ။ ရီရတယ်ဗျို့-- ဗြဲ....
7 March 2013 11:19
Phar Gaung lo pay lite par.
7 March 2013 16:24
Quelle honte SuSu nowe tu n'as pas la HONTE. The Burma hasalot of boys.Why u married with Muslman?????????U r very bad...........
7 March 2013 20:12
she can do anything what she want . A man who wrote the news isaMonk ? I am so confuse to read this news . Nothing concern with the Country . Please don't describe the innocent news . မျိုးစစ်တဲ့ မြန်မာ့သားကောင်း
8 March 2013 00:56
( ခက်နေပြီ)တကျီကျီအာ ကျီးဝါမရယ်တကယ်ပင်ဒို့များမြန်မာ သည်နိုင်ငံအားနှလုံးသားမှာ သူထားလေသလား?မျိုးဇာတ်ခြားသူ ကုလားဖြူအားသွေးသားပေးအပ်(နှင်း) သူ့စိတ်ရင်းများယုံစားဖို့ရေး ခက်နေပြီ ။ပြည်ထောင်စုစိတ် ကျင့်စာရိတ်ဖြင့်ဒို့ မိတ်အစစ် သူဖြစ်ရဲ့လား?လူများ,လူနဲ မိုက်မိုက်မဲမဲအသဲဖဲ့စား သူ့စကားများကိုးစားယုံဖို့ ခက်နေပြီ ။ဒို့ရိုးရာစစ် မြန်မာဖြစ်လည်းသူချစ်တိုင်းတစ်ပါး မိစ္ဆာများကမျိုဝါး လွှမ်းဖုံး ဆိတ်သုဉ်းစေ၍ဘိုးဘွားအမွေ သာသနာသည်သူ့ချစ်ဆွေယုတ် မိစ္ဆာစုတ်ကြောင့်နစ်မြုပ်ပျောက်ကွယ် ရှိလေမည်လား?ဒို့များဖွားရာ ဘိုးဘွားမြေအတွက်ပင့်သက်ကယ်ချ ကြောင့်ကြစိတ်များသူ့အားယုံဖို့ ခက်နေပြီ ။ကုလားဖြူမျိုး သွေးသားထိုးကျွေးအမျိုးပျက်မှာ မကြောက်ပါဘူး ။တဏှာစိတ်ထ ကာမယစ်မူးရာဂကျူး၍ ပျော်မြူးကြွသည်အော်ဘယ့်ဂုဏ်ဇာတ် ယွင်းလေပြီ ။
10 March 2013 17:54
နိူင်ငံရေးလုပ်ဆောင်နေတဲ့ မြန်မာမိန်းခလေးတွေက ကုလားတွေကို ယူကြတာ ရိုးနေပါပြီး
11 March 2013 09:15
မြန်မာနိုင်ငံ တိုးတက်ခို့ ဒီလိုလုမှိုးတွေလဲလိုအပ်တယ်
21 March 2013 17:58
22 March 2013 13:37
It's human right to shove B channel. Anonymous
မစုစုနွေးကို ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြောချင်တာက ကိုယ်ကမြန်မာမိန်းကလေးပဲ ကိုယ်လူမျိုကိုယူတောဘာဖြစ်မှာမိုလို့လဲ ဘာလဲဒီလိုရက်စက်ယုတ်မာတဲ့ကုလားတွေက.....များအပိုပါလို့လား Anonymous
7 May 2013 18:45
Ma Su Su Nway reveals her conception. We should not esteem the people who are shouting democracy, human rights, freedom etc:. Most of these people are deceivers. Now we know, after 24 years later. All pro-democracy people are revealing their conceptions even Amaysu.Ma Su Su Nway will marry Muslim man because her leader Amaysu had merried with cut Pakistan man.
11 May 2013 11:30
Hey, Can you manage to devlope our country and people. Your comment ,no use and no value.We understand , we myanmar national, always talking BLAH BLAH. Nothing to do.
11 May 2013 11:34
I agree with you. She isaTHIT SAR FOUT MA.
26 May 2013 10:16
i want to fuck daw suu and su su nway.iam ko san
နေပြည်တော် လမ်းပိုင်း မော်တော်ယာဉ်နောက်ပြန်တက်မှု အဖြေ
NLD ဘုန်းကြီး ရွှေညဝါလည်း ဦးဝီရသူ ရဲ့ အမျိုးစောင့်ဥပဒေကို အပြည့်အဝ ထောက်ခံပြီ
လူနည်းစု အနိင်ကျင့်ခံရမှုကြောင့် မလေးမှ ပြန်ရောက်လာသည့် မြန်မာနှစ်ဦး နှင့် အင်တာဗျူး
NLD လုံခြုံရေးအဖွဲ့များက အရှက်နှင့် သိက္ခာထိခိုက်အောင်ထိ ရိုက်နှက် ခဲ့သဖြင့် မြန်မာ အမျိုးသမီး တစ်ဦး ဆေးရုံတင်ထားရ
ပြည်ပနိုင်ငံအသီးသီးရောက် မြန်မာအားလုံးအတွက် အရေးကြီးသတင်း၊ ရောက်ရှိရာနိုင်ငံတွင်းရှိ ဒုက္ခသည်အမည်ခံ UN ကိုင်ထားသူ မြန်မာများကို ဝေးဝေးက ရှောင်ပါ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာ ကွယ်ပျောက်အောင် မလုပ်ပါနဲ့ ကြီးစွာသောဂိုဏ်းသင့်လိမ့်မည် မလေးရှားမှ မြန်မာ ငါးဦး သေဆုံးမှု ဘာတစ်ခွန်းမှ မပြောပဲ ခိုးဝင် ဘင်္ဂလီကို ဖမ်းဆီးသဖြင့် ဥရောပ ပါလီမန်က မြန်မာကိုရှုတ်ချ
ဘာသာခြားများ၊ လူမျိုးခြား အမျိုးသားများက ဗုဒ္ဓဘာသာသို့ ကူးပြောင်းပြီးမှသာ တရားဝင်လက်ထပ်ခွင့်ရမည့် ဥပဒေမူကြမ်းကို ဦးဝီရသူ တင်သွင်း
အောင်မြင်စွာကျင်းပပြီးစီးခဲ့သည့် အမျိုးစောင့်ဥပဒေ တင်သွင်းသည့် အကြိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲကြီး ကြေညာချက်
လားရှိုးမြို့ ရှမ်း-ကုလား အဓိကရုဏ်း မြင်ကွင်းများ (ဓာတ်ပုံ - ၅ ပုံ)
ရိုဟင်ဂျာကို မြန်မာတိုင်းရင်းသားအဖြစ် လက်ခံလိုကြောင်း NLD ပြောကြား၊ NLD ပါတီအား ဆန္ဒပြဖို့ နိုင်ငံအဝှမ်း ပြင်ဆင်
လားရှိုးအဓိကရုဏ်း နောက်ဆုံးရသတင်း (28.05.2013 10:00 pm)
လားရှိုး ရှမ်း-ကုလား အဓိကရုဏ်း အပျက်အဆီး မြင်ကွင်းများ (ဓာတ်ပုံ - ၃၂ ပုံ)
မြင်းမူ ကုလား-မြန်မာ အဓိကရုဏ်း စဖြစ်
အစ္စလမ်ဘာသာဝင် ရဲတိုက်မှ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် တစ်ဦးအား စိန့်မေရီ ဘုရားကျောင်းရှေ့တွင် စတင် ပါးရိုက် သည့် ဗွီဒီယို
အင်တာနက်မယ် နန်းခင်ဇေယျာနှင့် ယဉ်ကျေးမှု နောက်ဆက်တွဲ မြန်မာမိန်းကလေးအား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် သုံးဦးမှ မုဒိမ်းကျင့်ကာ ဓားဖြင့်ထိုးသတ်မှုအား ထူးချွန်သည့် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲမှ ညတွင်းခြင်း တရားခံများဖမ်းဆီးခဲ့
မြစ်ကြီးနား ဆွေးနွေးပွဲတွင် ကချင် ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော်၊ သမ္မတရုံး ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းနှင့်အတူ စကားလက်ဆုံကြနေသော ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်စိုး (ဓာတ်ပုံ- မေခ ...
နေပြည်တော် ကျောက်မျက်ပြပွဲတွင် ကျောက်စိမ်းတွဲများ ပြသထားစဉ် (ဓာတ်ပုံ – စနေလင်း/ ဧရာဝတီ) မန္တလေးမြို့တွင် ကျောက်စိမ်းဈေးကွက်နှင့် အချောထည် စက်ရုံများကို တ...
တစ် နှစ် နီးလာပြီ
သင် သတိထားမိရဲ့လား ??
ဘယ်အချိန်၊ ဘယ်ကို၊ ဘယ်လို သွားရမှန်းမသိနိုင်တဲ့ ဒီခရီးအတွက်
ဒေါင်းယောင် ဆောင်တဲ့ ကျီး
ကမ္ဘာကြီးကပေးနေသော """ တစ်လောကလုံးရဲ့ ဘုံရန်သူဖြစ်တဲ့ ဘာသာရေး အမည်ခံကာ နိုင်ငံရေးလုပ်နေပြီး ကမ္ဘာအနှံ့၌ လူသားဖောက်ခြင်း နည်းလမ်းဖြင့် နယ်ချဲ့ကာ ၊ မုဒိမ်းကေ...
ဇွန်လ ၁၈ ရက် ၂၀၁၃
လာမယ့် ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်မှာ အာဆီယံအဖွဲ့ အလှည့်ကျ ဥက္ကဌအဖြစ် တာဝန်ယူဖို့ မြန်မာအစိုးရ ပြင်ဆင်ဆောင် ရွက်နေတာတွေဟာ အဆင်ပြေ ချောမွေ့ နေတယ်လို့သိ...
liongrandpapa@gmail.com has shared something with you
ကြည့်လုပ်ကြပါဦး ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန ရေ
--- This message was sent by liong...
Organic စိုက်ပျိုးရေးကသာ စားသုံးသူ များနှင့်တောင်သူ များ၏ ဘဝ လုံခြုံမှုကို ကာကွယ်နိုင်
[image: Organic စိုက်ပျိုးရေးကသာ စားသုံးသူ များနှင့်တောင်သူ များ၏ ဘဝ လုံခြုံမှုကို ကာကွယ်နိုင်]
ရန်ကုန် ဇွန် ၁၈ မြန်မာ နိုင်ငံသည် စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိ...
ဝတ်စားဆင်ယင် ထုံးဖွဲ့မှုနှင့် မြန်မာ နှစ်ပါးသွား အစီအစဉ် ဖျော်ဖြေမည်
[image: ဝတ်စားဆင်ယင် ထုံးဖွဲ့မှုနှင့် မြန်မာ နှစ်ပါးသွား အစီအစဉ် ဖျော်ဖြေမည်] ရန်ကုန် ဇွန် ၁၈
မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသမီး ရေးရာအဖွဲ့ (MWAF) ကကြီးမှူး၍ ရန်ကု...
"NLD ၏ ပကတိ အခြေအနေ"
တစ်ယောက်သော ဝေဖန်သူမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နီးနီးကပ်ကပ် အလုပ် လုပ်ခဲ့ဖူးသော ဒေါ်ခင်လေး ဖြစ်သည်။သူမက ပါတီတွင်း အခြေအနေကို ယခုလို ညည်းညည်းညူညူ ပြောပြသည...
သရဒံ ရတု ကာလာနံ၊
ဇေဋ္ဌော ပဓာနံ ပုတ္တာနံ၊
တစ်ဆယ့်နှစ်လတို့တွင် တန်ဆောင်မုန်းလရာသီသည် မြတ်၏။
မယားတို့တွင် အဆင်းလှသောသူသည် မြတ်၏...
ရန်ကုန်မြို့တွင် စိတ်ဝေဒနာသည် မိန်းကလေးငယ်တစ်ဦးကို အိမ်နီးချင်းက အဓမ္မပြုကျင့်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ICON များ အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲခြင်း
၁၉၈၈ ခုနှစ်လူထုတော်လှန်ရေးမှသည် ၂၀၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီအထိ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်မှာ နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု Democracy Icon ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဆီးရီးယားအပေါ် ကန် - ရုရှား သဘောထားကွဲပေမဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဖြေရှင်းလို
Tuesday, 18 June 2013 ဆီးရီးယားအရေး နဲ့ပတ်သက်လို့ အမေရိကန်နဲ့ ရုရှား နှစ်နိုင်ငံကြား ကွဲလွဲမှုတွေရှိပေမဲ့ ဆီးရီး ယားနိုင် ငံတွင်း အကြမ်းဖက်မှုတွေ ရပ်ဆိုင်ြး...
အောက်ကစာမူဟာ ကျနော် ဂျာနယ်တစ်စောင်ကိုပေးထားတဲ့စာမူဖြစ်ပါတယ်။
ပြန့် နှံ့ ရေးအတွက် ကျနော့်Notes မှာထပ်တင်ထားပေးပါတယ်။
ပြင်ဦးလွင်မှ လူမဆန်တဲ့ ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ်
ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ် NLD ပါတီ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်သီဟက ခိုင်ဝတ်ရည် သန္တာမောင်(ခ) သဲသဲ ဆိုတဲ့ အမျိုးကောင်း အမျိုးသမီးလေးကို လက်ထပ်ယူမယ်လို့ ယ...
အင်တာနက်မယ်..အဖေါ်အချွတ်မယ်..ဘာဘာညာညာမယ်…အလန်းဇယားမယ်..များ သတိပြုရန် (ပေးစာ ၁၇)
ယနေ့ လူငယ်အများစု အင်တာနက် သုံးကြ၏..။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း လောက်ကစပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် အင်တာနက်များအသုံးပြုလာကြပါတယ်..။အရင်က အင်တာနက်ကို ဆိုင်တွေမှာအ...
NLD ပါတီ နှစ်ခြမ်းကွဲပြန်၊ NLD ကို ခြေကန် နှုတ်ထွက်ခဲ့သည့် ကယားတိုင်းရင်းသားများ ကိုယ်ပိုင်ပါတီသစ်တခု တည်ထောင်
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှ တိုင်းရင်းသားအားလုံးက ထောက်ခံကြကြောင်း၊ NLD ပါတီကို လူထု တစ်ရပ်လုံးက ထောက်ခံကြကြောင်း ဝါဒ...
ကယားပြည်နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က နုတ်ထွက်ထားသူတွေစုပြီး ကယားတိုင်းရင်းသားပါတီတခု ထူထောင်လိုက်ပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ဇွန် ၁၁ ရ...
NLD လုံခြုံရေးအဖွဲ့များက အရှက်နှင့် သိက္ခာထိခိုက်အောင်ထိ ရိုက်နှက်ခဲ့သဖြင့် မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ဦး ဆေးရုံတင်ထားရ
NLD လုံခြုံရေးအဖွဲ့များက အရှက်နှင့် သိက္ခာထိခိုက်အောင်ထိ ရိုက်နှက် ခဲ့သဖြင့် မြန်မာ အမျိုးသမီး တစ်ဦး ဆေးရုံတင်ထားရ ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ လူထု အတွက်ဆြို...
မြန်မာ့မိုဘိုင်း ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ပတ်သတ်၍ လုပ်ခွင့်ရမည် ဆိုပါက မြန်မာပြည်မှ ဂြိုလ်တုတစ်စင်း လွှတ်တင်နိုင်ရန် Sing Tel မှ အကူအညီ ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်က...
1. A letter of Submission
2. Thesis 3. Personal form 4. Remarks of the Departments on thesis ( Signature )
5. Авфторефрат диссертаци...
ဒါမျိုးကျ လူအခွင့် အရေး အော်ကြပါဦးလား အပေါင်း အပါတို. ရဲ..4months ago